सम्झनाको तरेलीमा पहिलो भ्यालेन्टाइन डे
सटको तल्लो भागको दुइ कुना अगाडी कम्मरमा गाँठो कसेर पिछाडि किताबको पोको फुलाएर अलि हतारमा स्कुल लम्कँदै थिए । समय कति भा थियो म यकिन त भन्न सक्दिन , घडी लाउनु मेरो लागि एकादेशको कथा नै थियो । यद्वपी फूलका पातबाट सुक्दै गरेका सितका तरेली अनि क्षितिजलाई छिचोल्दै खुलिसकेका घामका परेली र अनुहारमा आएका छिपछिप पसिनाले स्कुलको लागि समय भइसकेको सूचित गराउँदै थियो । त्यसै पनी दुइटा वार्ड छिचोल्नु जो पर्थ्यो। बयरबन ६ देखि बयरबन ४ हरकपुर । दुवै हात मुठी पारेर लामो लामो फट्का मार्दै, बेलाबेला दगुर्दै पनी थिए।पिछाडी बाट एक्कासि एउटा महिलाको आवाज आयो ओइ फुच्चे पख त्यो आवाजलाई त्यति वास्तै नगरी आफ्नै सुर पकडी रहे । आवाज झन् ठुलो र चर्को पारामा आयो ‘ओइ फुच्चे पख भनेको सुनिनस् ‘’अब त अडिनै पर्‍यो ।
दुवै हात खोले एउटा हातले पसिना पुछ्दै अर्को हातले घामको प्रकाश छेकेर अडिए । तल्लो गाउको आन्टी रहिछन । चिने मैले । आन्टी छेउमै आइन ,फरियाको गाँठो खोलेर एउटा कच्याककुचुक्क परेको कागज निकाल्दै थर्काइन । यो चिठ्ठी कसले दियो ? तँ कसको छोरा होस्? मैले बुझिहाले, हिजो मात्र चिठ्ठी दिएको केटीकी आमा रहिछन् । डरले सातो गयो, मुटु निस्किएर हातैमा आउला झैँ धड्किँदै थियो । टाउको पैँतालिस डिग्रीमा झुकाएर स्वयन्त्रमा कुनै कम्पन नल्याई सासले मात्र जवाफ दिए । “कार्कीको छोरा’’ रिसले चुर भएकी ती आन्टीले मेरो कान बटार्दै एउटा अङ्ग्रेजीको शब्द प्रयोग गरिन त्यो मैले बुझिन तर उम्रिँदैको तीन पात जिरे के के हो के के गाली गर्दै उठ बस गर्न लगाइन । निमठेर राता राता भएका कान बिस्तारो समाउँदै त्यस्तै पाँच सात पटक उठबस गरे । ,पिछाडिको किताबले उठ बस गर्दा निकै घोच्दै पनि थियो ।
उठबसको गन्ती गर्न नि भ्याइन आन्टीको पनि रिस अनि साम्य भएछ । कसो चिठी मेरो हातमा थमाएर “स्कुल जा आइन्दा फेरी यस्तो हर्कत गरिस् भने तेरो आमाको अगाडी पिट्छु । म चिठ्ठी मुठी पारेर पिछाडी नफर्की स्कुल तिर दगुरे । अँ साची त्यो चिठ्ठी मैले लेखेको थिइन नी मेरो त उमेर नै कहाँ भाथियो र चिठ्ठी लेख्ने ।,गाउको राजु दाइले दिन लगाउनु भा थियो । मुर्दाले पठाउनेको नाममा आफ्नो नाम नलेखी पठाएको रहेछ । नत्र तिनको त झन् कान मात्र रन्किने होइन गाला नि चड्कीन्थीयो ।अलि दिन पछि थाहा भयो त्यो दिन ती आन्टीले गालिगर्दै बोलेको अङ्ग्रेजी शब्द भ्यालेन्टाईन डे पो रहेछ ।
जीवनको पहिलो यो दिवसआज पनि यो दिवस आउदा झुक्किएर कान छाम्ने गर्छु् ।
उमेरले दुइबिस छुँदै गर्दा प्रणय दिवसको अर्थ र विस्मरण नै नहुने ती विगत आज अनुपम हुँदो रहेछ । ए अ साची मेरो भ्यालेन्टाईन डे सदै अर्काको चिठी मात्र ओसारेर चाही काटेको होइन नि । तोरीको तेलले जुल्फी फर्काइ ,निधारमा रुमालको फेटा बाँधेर ,पन्ध्र रुपैयाँ पर्ने मेलामा किनेको कालो चस्मा अनि गोजीमा अर्को रुमाल आधा निकालेर हिँड्दा आफूलाई हिरो वाला फिलिंग आउँथ्यो ।
अनि यस्तो हिरोको लब नै नपर्ने कुरा हुन्छ ? फरक यति हो कि अहिले प्रेम प्रस्ताव गर्न मोबाइलको एक एम बि डाटा काफी छ ,उ बेला फाल्गुन दुई नै कुर्नु पर्थ्यो । त्यो पनि रगतले लेखेको प्रेम पत्र हुनु पर्थ्यो । सहज र सकारात्मक उत्तर आउन कुन्नि कुन बेला कसैसँग मिठो सम्बन्ध त गाँसिएकै हो । इमानदार नछोडी भन्दा खोइ त्यो माया थियो कि के थियो त्यो त थाहा छैन तर माया जस्तै मिठो थियो। आज स्मरण गर्न पनि पाप लाग्ने परिस्थिति बनेको छ । त्यो मिठो पल बसन्तको एक झोक्काले हरेकलाई कसैन कसैको एउटा मिठो याद दिएर गएकै हुन्छ। ती यादहरूलाई चिर्दै हर सुख दुखमा साथ दिने श्रीमती र सन्तान सँग रमाउँदै विश्वासका साथ एक अर्कामा समाहित हुनु नै प्रणय हो वास्तविक माया हो ।